रहरकाे दाल र चना निकै गुणकारी, यसकाे फाइदा जानेर अचम्मित पर्नु हुनेछ - ज्ञानविज्ञान
याे भिडियाे पनि हेर्नुहाेस्
Topics #चना #​चना खानुका फाइदा #चनाको दाल खानुका फाइदा #रहरकाे दाल #रहरकाे दाल खानुका फाइदा
Don't Miss it किन आउँछ( अपन वायु ) पाद ? तपाईंलाई थाहा छ ? पाद रोक्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ
Up Next आँखामा कस्ता समस्या आउँछन् ? कसरी बच्ने ? सम्पुर्ण जानकारीहरु (२६ सय शब्द)
बिहान खाली पेटमा मन तात्तो पानी किन पिउने ? जान्नुहोस्
जीवन उपयाेगी १२ प्रेरक भनाइहरू
जीवनमा सकारात्मक उर्जा ल्याउनका लागी हामीलाइ प्रेरक भनाइहरूकाे अावश्यकता पर्छ । जसले हाम्राे जीवनलाइ उज्यालाे पाटाे तर्फ लैजान पनि मद्दत…
के तपाई धेरै पिर लिने गर्नुहुन्छ ? दिमाग स्वस्थ राखी अब यसरी शरीर र मस्तिष्कलाइ सन्तुलित बनाउनुहोस्
दिमागी रुपमा स्वस्थ मानिसहरुमा स्वस्थ बानी व्यहोरा हुन्छ। उनीहरु आफ्नो संवेदना, भावना, सोच र बानीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र जीवनलाई…